HomeWararka Ciyaaraha MaantaReal Madrid oo u dhaqaaqeysa saxiixa Tanguy Ndombele.
May 14, 2021 Wararka Ciyaaraha Maanta, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay u aqoonsatay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham Hotspur Tanguy Ndombele inuu yahay bartilmaameedka suuqa kala iibsiga.
24 jirkaan ayaa labo sano oo isku dhaf ah ku qaatay Waqooyiga London, isagoo shan gool ka dhaliyay 52 kulan oo uu ka soo muuqday Premier League.
Iyadoo ciyaaryahanka reer France uu heysto qandaraas waqti dheer ah, Spurs ayaa weli ku jirta boos adag oo ku saabsan mustaqbalka kubadsameeyaha.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Football Insider , Real ayaa ka fiirsaneysa inay tijaabiso go’aanka Spurs inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Inkasta oo ay warbixintu sheeganayso in kooxda reer England ay ogtahay xiisaha Real, hadana wax go’aan ah lagama gaarin in Ndombele loo ogolaan doono inuu ka tago kooxdiisa haatan ee mustaqbalka dhow.
Waqtiga uu Ndombele waqti ku qaatay kooxda ka maqnaanshaha tababaraha ku meel gaarka ah Ryan Mason , Spurs ayaa la filayaa inay sugto ilaa ay ka magacaabayaan tababare cusub oo buuxa.